Haweeneyda dhimatay ayaa la sheegay inay ka mid ahayd ganacsatada caanaha geeya magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena labada qof ee dhaawacmay la sheegay inay iyaguna ahaayeen laba qof oo ka mid ah ganacsatada caanaha.
"Ciidamada dowladda rasaas ayay ku fureen gaari caano siday oo kasoo baxay deegaan u dhow degmada Afgooye. Haweeney ayaa ku dhimatay laba kalena way ku dhaawacmeen," ayuu yiri goobjooge ku sugnaa halka ay rasaastu ka dhacday.
Gaarigii caanaha soo soo qaaday ayaa dib ugu laabtay deegaankii uu ka yimid isagoo wada maydaka haweeneyda iyo labada qof ee kale, iyadoo ay goobta ka baxsadeen ciidamadii rasaasta furay oo xirnaa direyska milateriga Soomaaliya.
"Darawalka gaariga wuxuu diiday inuu joojiyo isagoo ka baqdin qabay in dhac loo geysto, taasina waxay keentay in rasaasta khasaaraha geysatay lagu furo," ayuu yiri goobjoogaha la hadaly HOL oo sababo ammaan awgeed u qariyay magaciisa.
Ma jiro hadal kasoo baxay dhinaca dowladda Soomaaliya oo ku saabsan dilka iyo dhaawaca ay askar ka tirsan ciidamada dowladda u geysteen dad shacab ah oo ka ganacsada caanaha, iyadoo aysan ahay markii ugu horreysay oo ciidamada dowladdu si bareer ah u toogtaan dad shacab ah.
Jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye oo falkan uu ka dhacay ayaa waxaa xiliyadii ugu dambeeyay kusoo kordhayay isbaarooyin ay ciidamada dowladdu dhigayaan, kuwaasoo ay lacago baad ah uga qaadanayaan gaadiidka dadweynaha ee jidkaas istcimaala.